प्रवास बाट जन्म घरलाई चिठ्ठी – बिनोद भण्डारी (बल्कोटे बिने ): सिमानापारी डट कम simanapari.com
पर्देश बाट कान्छाको सलाम !
चार चौकोस , वरिपरी सुन्दर बगैचा र लटरम्म फलेका फलफुलको बिचमा सलक्क परेका पाटि ढुँगाको ओत लागेर टक्लक्क उभिएकी तिमी मेरो हरेक क्षण मन मस्तिस्कमा र राती सपनीमा निरन्तर घुमेकी छौ ।
हाल म तिमीलाई चिहाएर पनि अड्कल गर्न नसकिने दुरीमा खुन पसिना बगाउदै तिम्रो त्यो न्यानो स्पर्स माया र मनोभावको कल्पना गर्दै छु ।
धेरै याद आँउछ , तल्लो तलाको मझेरीमा स-परिवार गोलबंदी बाँधेर चौको चुल्होमा कालो हाँडी बसाली पर्र्र्र्र्र्र मकैका फुला उठाउदै बाक्लो, अमिलो मोई संग कपाकप खान्थ्यौ । हो त्यही समयमा तिम्रो हामीप्रतीको मायाको आभास हुन्थ्यो ।
तिमी माटोले पोतिएकी थियौ र छौ, तर ऐले उपभोग गर्दै आएको गगन चुम्बीमा महँगो मार्वलले बुट्टा भरेको भन्दा धेरै महत्व र मान्यता लाग्छ अचेल । यो समयको खेल भनौ या हाम्रो सरकार को लापरवाहीको कारण प्रदेशीन बाध्य हामी पिडीतको भाग्य हो ?? तिम्रो धेरै संझना आँउछ । तिम्रै काखमा लडिबुडी गरेका ति दिन फिरौतीमा आएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
पर्देशमा धेरैकुराको सुविधा छ , तर पनी तिम्रै मायामा कल्पित हुन्छौ हामी । ऐले घर भित्रै चर्पी छ । पानिको सुविधा सहित, तर पनी त्यो बारीको छेउछाउमा एक बोतल पानि बोकेर हरेक दिन कुदेको याद छ, त्यसैको धेरै महत्व लग्दैछ । वर्तमानमा हामी उपल्लो तलो विद्युतीय साहारामा चढ्छौ । तरपनी त्यो समयमा एक बोरा अन्न बोकेर ति काठे भर्यागं चढेकै महत्वपूर्ण लाग्छ ।
हामीलाई तिमीले जन्मायौ, सुरक्षित साथ हुर्कायौ र आफ्नो खुट्टामा उभिने बनायौ ! लगत्तै हामिले तिम्रो त्यो माया ममता र मान्यता सबै चटक्क बिर्सीन बाध्य बनेर तिमीबाट टाढा बसाई सरेका छौ ।यो हाम्रो बाध्यता हो । यसलाई हामिले तिमीलाई घिणा गरेको कदापि नठान्नु है ! मैले गरेका हरेक प्रगतिमा तिमीपनी जुडेकी छौ पृय घर ।
यो प्रदेशी बसाई त्यत्ती सजिलो छैन तर यही प्रवासी भुमिले दुःख यातना संगै दिएको २-४आना कमाईका कारण तिमी बिरानी बन्न परेकी हौ । आखिर यहाँ आउनको कारण यो ठाउको कमाईले तिमीलाई अझ सुंदरी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने थियो तर ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भैदियो । ऐले त्यस्तो सोच्ने बिरल्लै भेटीन्छ बरु तिमी वरिपरी फलेका ति अमृत जस्ता फलफुर मौसम अनुसारको खेती बालीलाई बाँझो बनाएर प्रवासमै घरजाम गर्ने चलन बढेको छ ।
यती धेरै माया र संझना हुदाहुदै जानिजानी तिमीबाट टाढा बस्नुको जिन्दगी चाहे स्वर्ग नैभएपनी कमीको आभास हुन्छ । तिम्रो संझनाले निरंतर सताउछ यहाँ ! तिम्रो संझनामा हजारौ पेज,घन्टौ सम्म लेखेपनी शब्द सकिदैनन । न त तिम्रो यादनै टुट्छ !
पृय घर ! तिमी मेरा धेरै अग्रजहरुको चोला धानेकी जननी हौ । त्यसैले पनी म कदापि बिर्सीने छैन । मेरो चोलाको अन्तिम घडी सम्म पनी तिम्रो संझनामा रहने छु । बेला बखत फुर्सत मिलाएर तिम्रो न्यानो स्पर्श लिने बाचाको साथ मेरा तिमीमा समर्पित २ शब्द यही बिट मार्दछु ।
उही तिम्रो कान्छो पिढी